कयौँ बिमारीको रामबाण हो तेजपत्ता, यसरी पाउनुहोस् पत्थरी जस्ता समस्याबाट मुक्ति ! – Annapurna Daily
कयौँ बिमारीको रामबाण हो तेजपत्ता, यसरी पाउनुहोस् पत्थरी जस्ता समस्याबाट मुक्ति !
On Feb 7, 2022 2,182
एजेन्सी । तेज पत्ता एक आयुर्वेदिक जडीबुटी हो। तेज पत्ताहरु धेरै नेपाली खानाहरुमा प्रयोग गरिन्छ। मसलाको रूपमा प्रयोग गरीने यी तेजपत्ताहरुमा धेरै औषधीय गुणहरु पाईन्छ। तेज पत्तालाई स्वास्थ्यको लागी पनि लाभदायक मानिन्छ र यसलाई खाएर धेरै प्रकारका रोगहरु निको हुन्छन्। तपाइँ प्राय देख्नु भएको छ कि धेरै मानिसहरु लाई पनि तेजपत्ताको चिया पिउन मनपर्छ।
यदि सम्भव छ भने, एक सामान्य व्यक्तिले पनि यसलाई थोरै प्रयोग गर्नु पर्छ। जब पानी राम्रो तरिकाले उम्लन्छ र आधा रहन्छ, त्यो हो, एक कप हुनेवाला भएपछि ग्यास बन्द गर्नुहोस् र यसलाई तल झार्नुहोस् । यस पछि, यसलाई सफा छलनी वा सफा कपडा को मद्दतले फिल्टर गर्नुहोस् र एक कपमा राख्नुहोस्। अब तपाइँको काढ़ा उपयोगको लागी बिल्कुल तयार छ। तपाइँ एक दिन दुई पटक यो काढ़ा को उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ, यो निश्चित रूप बाट तपाइँलाई राहत दिनुहुनेछ।